IR Beam Counter Vagadziri & Vatengesi - China IR Beam Counter Fekitori
Iyi yekutengesa traffic counter iyo inogona kupihwa simba neese mabhatiri uye simba. Vazhinji vedu vekutengesa traffic counter vane zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu yekutengesa traffic counter. Huwandu hwevapfuuri kuyerera ndicho chakakosha chiratidzo chechitoro mashandiro mumusika. Mukushanda kwezuva nezuva, tinogona kutonga zvakananga mhando yemabasa ezvitoro mumusika ...
Uyu muchina wakachipa uye unoshanda wekuverenga kwevanhu. Mazhinji edu ekuverenga ekuona sensor zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Iwe unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vatumire iwe rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu yekuverenga kwevanhu sensor. Iyo yekumisikidza mutengo weiyo HPC015U yekuverenga kwevanhu sensor iri yakaderera zvakanyanya, pasina chero kuvaka, nekukurumidza kumisikidza, uye inokodzera kwazvo kune yakakura-mizinga cheni modhi dzimbahwe kuti iite chaiyo yevanhu ...
Mazhinji emakambani edu etsoka ane zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu yekutsika counter. Isu tinoshandisa ino tsoka yekumisidzana sensor kupa mhinduro inokurumidza, yakapusa uye inokodzera yekuverenga mhinduro kumaraibhurari mazhinji, mamuseum, nzvimbo dzinoyevedza, zvitoro zvemaketani, supamaketi, uye dzimwe nzvimbo kumba nekune dzimwe nyika. Iyi yekumisidzana netsoka inogona zvakare kushandiswa kune automa ...
Iyi iri nyore isina waya yedhijitari vanhu pakaunda iyo inogona kuburitsa dhata kuburikidza neUSB, Vazhinji vedu vanhu veadhijitari vanhu vanopokana vane zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve vedu vanhu veadhijitari vanhu. Masayendisiti manejimendi emusika wemazuva ano anovimba nedatha kuti utaure. Yakarurama data inobvumira vanoshandisa kuti vabate ruzivo rwakakwana uye data munguva yekutanga, uye vanogona kugadzira ...
Iyi isiri yevanhu isina waya inogona kupfuudzwa pasina WIFI, Vazhinji vedu vanhu makava zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaurirana nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu vanhu kaunda. Munguva ye data hombe, People counter inoita kuti data rinyatsoita uye inoita kuti bhizinesi rive nyore. Infrared vanhu kaunda yakakodzera kumaraibhurari, yepamhanyisa-njanji zviteshi, nharembozha zvitoro, tarenda mucherechedzo ...